Halkee marayaan doorashooyinka Aqalka Sare, xulufeysi socda iyo qorshaha Villa Somalia - Allbanaadir Media
Home Xogta Dahsoon Halkee marayaan doorashooyinka Aqalka Sare, xulufeysi socda iyo qorshaha Villa Somalia
Halkee marayaan doorashooyinka Aqalka Sare, xulufeysi socda iyo qorshaha Villa Somalia
Waxaa si habsami leh u socda doorashada mudaneyaasha cusub ee Aqalka Sare taasoo dhowaan laga bilaabay dowlad goboleedyada kala ah Jubaland iyo Koonfur Galbeed, halka maamul goboleedka Galmudug iyo Hirshabelle ay wadaan qaban qaabada codaynta Aqalka Sare.
29 July ayaa la qabtay doorashada xubnaha Aqalka Sare ee Jubaland kuwaas oo ka kooban 4 xubnood, wadarta guud ee xubnaha Aqalka Sare ee Jubaland waa 8. Doorashadas waxaa kusoo baxay Xildhibano ay ka mid yihiin Senator Cabdullaahi Sheekh Fartaag iyo Iftiin Xasan Baasto oo horay uga mid ahaa barlamaankii 10aad.
Jubbaland ayaa qorshaynaysa in ay dhawaan soo dhamaystirto doorashada 4 kursi ee Aqalka sare ka soo galaya Jubbaland.
Dowlad-goboleedka Koofur Galbeed, ayaa 2 Aug qabtay doorashada xubnaha Aqalka Sare ee maamulka waxaana ku soo baxay 5 xubnood, taasi waxa ay la macna tahay in ay u harsantahay doorashadda 3 xubnood.
Koofur Galbeed ayaa laga soo doortaa 8 Senator.
Inta aan lagu galin codaynta Sanators, waxaa khilaaf xooggan ka dhexeeyaa guddiga doorashada maamuli lahaa oo waxa ayba ku guuldaraysteen in ay qabtaan doorasho dhexdooda ah oo ay iska dhexdoortaan gudoomiye iyo ku xigeen.
Xafiiska wasiirka 1aad ee xukumada oo waday dadaalo xooggan ayaa sheegay in uu soo gabagabeeyay khilaafka isla markaana Xerada Afisyooni doorashada guddiga lagu qabanayo maalinta Sabtida.
Dowlad-goboleedka Galmudug oo si aad ah ugu mashquulsan dagaalo ka dhan ah Al-Shabaab oo soo cusboonaaday bari gobolka Mudug ayaa soo gudbiyay liiska xubnaha guddiga qabanqaabada doorashada Aqalka Sare.
Qoorqoor ayaa wajahaya culeyska ugu badan maadaama kuraasta qaar ay ku loolamayaan siyaasiyiin waaweyn iyadda oo xubnihii horey ugu fadhiyey ay doonayaan soo laabasho Villa Soomaaliyana ay saareyso cadaadis ah in uu danahooda ka shaqeeyo.
Si lamid ah Galmudug, dowlad-goboleedka Hir-Shabeele ayaa so gudbiyay liiska xubnaha qabanqaabada doorashada Aqalka Sare wallow ay jireen muran iyo is-fahan-waa la xiriira xulista guddiga.
Hirshabeelle, waxaa horyaalla imtixaan la mid ah kan Galmudug, waana tan keentay in muumulku uusan wali soo saarin liiska Musharixiinta Aqalka Sare.
Puntland ayaa ku jiray xuska munaasabada 1-da August balse markii dambe uu madaxweyne Siciid Deni fadhi la yeeshay odeyaasha dhaqanka, waxaa ayna isla meel dhigeen arimaha doorashada iyo xulista xubnaha Aqalka Sare ku metalaya dowladgoboleedka Puntland.
Kahor shaacinta liiska musharaxiinta, hogaamiyaha Puntland waa inuu latashadaan dhamaan dhinacyada ay u khuseyso mana jiro cadaadis dowlada dhexe uga imaanaya, waana tan uu uga duwanyahay dowlad-goboleedyada kale ee dalka.
Musharaxiinta madaxtinimada ayaa qudhooda waxay wadaan olole hoose oo ay ku doonayaan in ay kusoo saartaan Senatoro.
Sida musharaxiinta ugu kala adkaadaan kuraasta Aqalka Sare waxay soo saareysaa musharaxiinta ugu cad-cad. Jadwalka doorashadda waxaa ku cadeyd in xulista Senate-ka ay kusoo dhamaato saddex maalmood oo ka bilaabaneysa 25-ka July. Balse, maadaama dib-u-dhac badan jiro, haddana waxaa laga cabsi qabaa in ay kasii dib marto doorashada madaxweynaha oo loo muddeeyay 10-ka October.